के कोरोनालाई ब्रुफेन र सिटामोलले ठिक हुन्छ ?
फरकधार / ६ चैत, २०७६
यदि तपाईं सामाजिक सन्जालमा आएका सबै कुराहरुमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय पक्कै कोरोना भाइरस संक्रमण र यसबारे अनेक कुराहरु हेर्नुभएको होला । सामाजिक सन्जालमा अहिले विश्वमा त्रास बनिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथामका विषयमा अनेक समाचार आइरहेका छन् ।
कतिपयले त ब्रुफेन खाँदा वा सिटामोल खाँदा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सकिने बताइरहेका छन् । अनि यस्ता मेसेज हाम्रा मेसेन्जर यापहरुमा पनि आइरहेका छन् ।
तर, के साँच्चिकै ब्रुफेन, ब्रुसेट वा सिटामोल खाँदा कोरोना भाइरस लाग्दैन त ?
विश्वका विभिन्न देशमा अहिले कोरोना भाइरसबारे अध्ययन भइरहेको छ । तर, कुनै पनि देशमा अध्ययन गरिरहेकाहरुले ब्रुफेन खाँदा कोरोना भाइरस ठिक हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । त्यस्तै, सिटामोल खाँदा कोरोना भाइरसका देखिएका लक्षण ठिक हुन्छन् भन्ने पनि कसैले बताएका छैनन् ।
त्यसैले यो सब अहिलेका लागि हल्लामात्र हुन् ।
बरु अहिले सामान्य ज्वरो आउँदा वा शरीर दुख्दा पनि औषधी खाने बानी भएकाहरुले एक पटक चिकित्सकसँग परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा बाहिर आएका छन् । अनि अहिले औषधी खाइरहेकाहरुले कुनै औषधी खान छोड्ने हो भने पनि एक पटक चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपाली बजारमा पनि सिटामोल र ब्रुफेन दुवै लोकप्रिय औषधी हुन् । यी दुवै औषधी हामीले ज्वरो आउँदा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर, यस्तो समयमा पनि हामीले यसको साइड इफेक्टबारे चाहिँ बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौँ ।
तर, अहिले विश्वमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट रोक्नका लागि ब्रुफेन वा सिटामोल प्रभावकारी देखिएको छैन । यदि तपाईंलाई पनि चिकित्सकले यी औषधी नखानू भन्ने सल्लाह दिएका छन् भने यी औषधीको सेवन तपाईंहरुले गर्नु नै हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : चैत ६, २०७६ बिहीबार १३:८:४५,
इमेल: [email protected]arakdhar.com